याै’न कुण्ठामा रुमलिएर बाँच्नेहरुका लागि ! अवस्य पढ्नुहाेस् -
याै’न कुण्ठामा रुमलिएर बाँच्नेहरुका लागि ! अवस्य पढ्नुहाेस्
से’क्स समस्या होइन, समस्या व्यक्तिको आफ्नै कुण्ठा हो। कोही लिं’गको आकार सानो भएको कुण्ठामा रुमलिएका छन् भने कोही छातीका दाना साना भएका चिन्ताले ग्रस्त छन्। शताब्दीयौँदेखि ‘मोरल पुलिसिङ’को एकमात्र काम गरिरहेका सरकार र सामाजिक संस्थाहरूको अत्याचारमा मानिसहरू बिस्तारै खुल्न थाल्दा अनेक समस्या देखिनु स्वाभाविक हो।
← डा. पाण्डे भन्छन्- नेपालमा कोरोनाले धेरैको मृत्यु हुँदैन, रोगलाई जित्न सक्ने १२ कारण यस्ता छन् ! पुरा पढ्नुहोस्…
दिदी र बहिनिले श्री’मान नै साटा’साट गरेर स’म्बन्ध राखेपछि… →